Sidee Falanqeeyaan Waxqabadka SEO? 6 Talooyin ah khabiiro Semalt ah
Mashiinnada raadinta waa xayawaanno qarsoon. Albaabiyaasha awooda badan ee internet-ka, waxay u baahan yihiin inay hubiyaan inay u keenaan kaliya tayada ugu sareysa iyo natiijooyinka ugu habboon isticmaaleyaashooda, waaba inaan laga dhigin dhinac kale, xulashooyinka ka fiican.
Si loo bixiyo natiijooyinka raadinta tayada leh ee noocaas ah, mashiinka raadinta wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo in algorithmka saxda ah ee ay u adeegsadaan darajaynta raadinta ay weli ahaadaan sir sir ah oo dhawrsan. Ka dib oo dhan, haddii urur ogaado qaaciddada saxda ah way ka faa'iideysan karaan inay u fuulaan qiimeynta.
Flipside-ka, matoorada raadintu waa inay siiyaan bogag internet wax tilmaamaya waxa ka caawin doona inay darajadooda si fiican u kala sarreeyaan, haddii kale, qof walbaa indhoole ayuu ku soconayaa. Sida matoorada raadinta tanaasulka ah sida Google, Yahoo! iyo Bing waxay soo bandhigeen dhowr tilmaamood oo ku habboon in lagu raadiyo mashiinka raadinta (SEO) — liis tayo leh oo dhammaan mareegaha ugu sareeya ay wadaagaan.
Waana tayadaas oo aasaas u ah falanqaynta SEO.
Maxaan ugu baahanahay inaan falanqeeyo wax qabadkeyga SEO?
Waxaad dhistay degel. Waxaad raacday aasaaska aasaasiga ah ee kobcinta mashiinka raadinta. Waxaad u soo saartay goobtaada geedka weelka. Maxaad ugu baahan tahay inaad falanqeyso waxqabadkaaga SEO?
Waxaa jira laba sababood oo waaweyn.
Marka hore aqoontu waa awood. Xaqiiqdi, waad ku dhisi lahayd shabakadaada 'buugga', laakiin dhab ahaan ma ogid sida ay wax u socdaan illaa aad runtii tijaabiso. Waxay noqon laheyd inaad si fiican u wanaajisay shabakadaada, laakiin tartamayaashaadu waxay ku guuleysteen inay tayadooda wax yar ka sii fiicnaadaan, oo weli waxaad heysataa xoogaa shaqo oo aad qabatid. Markaad falanqeyso waxqabadkaaga SEO waxaad garan kartaa meelaha ugu muhiimsan ee hagaajinta, waxaadna ka gudbi kartaa tartamayaashaada qiimeynta.
Marka labaad, SEO wuxuu ku jiraa xaalad isbeddel joogto ah. In si joogto ah loo wanaajiyo tayada natiijooyinkooda iyo in la sii wado hal talaabo bogagga hore ee shabakadaha, Google, Yahoo! iyo Bing si joogto ah ayey ugu jaangooyaan algorithms-ka. Taas macnaheedu waa waxa kugu soo gaadhay kaalinta ugu sarreysay ee qiimeynta usbuucii la soo dhaafay ma dhici karto inay kugu khasbanaan inaad halkaas ku gaarto toddobaadkan. Haddii aad isbarbar dhigto habdhaqanka ugu wanaagsan ee SEO ee maanta ka horimaanaya habdhaqanka ugu wanaagsan ee 10 ama 15 sano ka hor, isbeddelka ayaa ah mid aad u xun. Liiskaan cusub ee algorithm-ka Google wuxuu ka dhigaa akhris wacan.
Falanqaynta waxqabadkaaga SEO waxay wanaajisaa websaydhkaaga waxayna kaa caawinaysaa inaad ka jawaab celiso isbedelka. Muhiim ayey u tahay qof kasta oo raba inuu gaaro meesha ugu sareysa qiimeynta oo uu halkaas sii joogo.
Marka sidee loo falanqeeyaa SEO?
6da qaab ee muhiimka ah ee lagu falanqeeyo waxqabadkaaga SEO
Falanqaynta macnaha leh ee waxqabadkaaga waxay kuxirantahay lix mabda 'oo muhiim ah oo ilaa xad ku sii jiray taariikhda taariikhda SEO-astaamaha ayaa aasaas u ah falanqaynta Semalt. Aynu eegno mid walba.
Marka isticmaale uu eray eray ama weedho galiyo Google, tani waxay noqotaa awooda wadida raadinta. Hubso, Google ayaa falanqayn kara meesha isticmaalaha, ama astaanta shaqsiga ay dhiseen sanado badan, laakiin macluumaadkani si fudud ayuu ugu daraa milixda iyo basbaas raadinta. Ereyga furaha waa saxanka ugu weyn.
Marka Google uu shabaggiisa ku xiro World Wide Web isagoo raadinaya ereyadan furaha ah, ma laga heli doonaa boggaaga internetka? Ma taqaanaa dhammaan furaha ereyada muhiimka ah ee boggaagu ku habboon yahay marka la eego alaabada aad iibiso iyo warshadaha aad ku jirtid? Haddii aad tahay shirkad sharci qoys ku leh London, miyaad u muuqataa natiijo ka dhalata 'sharciga qoyska London'? Haddii aad dukaan Pizza ku leedahay Brooklyn, miyaad u muuqataa natiijada 'pizza Brooklyn'? Kuwani waa tusaalooyin aad u aasaasi ah oo lagu muujiyo fikradda; falanqaynta ereyga dhabta ah iyo kobcinta ayaa aad uga sii qoto dheer.
Falanqaynta ereyga furaha ayaa tilmaamaysa ereyada furaha ah ee ay tahay inaad diiradda saarto iyo halka ay tahay in lagu dhigo websaydhkaaga. Ku meelee ereyada muhiimka ah aagagga muuqaalka sare sida cinwaannada iyo metadata waxay hubineysaa in matoorrada raadinta ay arkaan.
Maalmihii hore ee raadinta internetka, Google waxay raadineysay hab ay ku dammaanad qaado tayada natiijooyinkooda. Waxay fahmeen in ku tiirsanaanta guud ee ereyada furaha ay arki doonaan websaydhyada 'keyword keyword' - iyagoo adeegsanaya ereyada furaha ah meel kasta oo ay ka heli karaan bartooda si ay ugu fuulaan ugu sarreynta qiimeynta. Marka waxay la yimaadeen xalka xariifka ah: waxay baarayeen xiriirada.
Fikirkoodu wuu sahlanaa: xiriirada badan ee laga helo ilo dibadeed ilaa degel, tayo sare oo websaydhku yahay. Waa sababta aad had iyo jeer u aragto Wikipedia ugu sareeya raadinta-ma ahan kuwo si gaar ah u daneynaya kobcinta ereyga muhiimka ah, laakiin sida lagu muransan yahay ilaha intarnetka ee ugu kalsoonida badan, websaydhyada kale waxay marwalba ku xirnaadaan Wikipedia marwalba, iyagoo si weyn u kordhinaya sharciyada goobta. . Haddii aadan horey u sii ogeyn, waxaan ku xiriiray maqaal Wikipedia maqaalka kore.
Iskuxirka dhismaha wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa SEO. Falanqaynta xiriirrada websaydhkaaga, labadaba gudaha iyo dibaddaba, waxay muhiim u tahay fahamka sida 'loo ixtiraamo' boggaaga internetka ay ku yihiin matoorada raadinta. Nuxurka badanaa wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa hagaajinta waxqabadkaaga xiriirka, maadaama aad ubaahantahay inaad siiso boggaga kale sabab macquul ah oo kugu xirisa.
Falanqaynta barta internetka
Sidee fiican ayaa loo dhisay boggaaga internetka? Mashiinnada raadinta waxay diraan 'crawler web' oo si nidaamsan uga baaraandega internetka oo tilmaama waxa ku jira. Fududaynta ay ku soo uruurinayaan macluumaadka lagama maarmaanka ah waa qodob ka mid ah SEO.
Ka fikir sida safarka dukaamaysiga. Bogagga internetka sida Googlebot , degel si fiican loo dhisay ayaa u ekaan doona daalacashada suuq-weyne cusub - wax walba si fiican ayaa loo keydsan yahay, oo si cad loo calaamadeeyay, loona meeleeyay meel si fudud loo fahmi karo. Websaydh si xun loo dhisay ayaa la mid ah sida ka adeegashada garaashka lagu iibiyo — urur ma jiro, sumad la'aan, iyo waxyaabo aan caadi ahayn ayaa lagu tuuraa meel kasta iyo meel walba.
Falanqaynta barta internetka ayaa diiradda saareysa gadaal boggaaga. Waxay kaa caawineysaa inaad fahanto sida ugu fudud ee gurguurte webku ugu dhex socon karto boggaaga si aad u hesho macluumaadka ay u baahan tahay. Ka dib waxay ku siineysaa liis horumarin ah oo aad ku wanaajin karto kaabayaashaas.
Sidee caan u ah, caan ah oo la aamini karaa waa astaantaada, kaliya maahan aragtida Google, laakiin waxay ku jirtaa indhaha macaamiisha sidoo kale?
Ilaalinta astaanta guud waxay siisaa aragti guud oo guud oo ku saabsan jiritaankaaga internetka - kuma eka kaliya shabakaddaada, laakiin dib-u-eegista isku-duwayaasha sida Google, Facebook, Trustpilot iyo Glassdoor, waxayna falanqeeyaan waxqabadka guud ee internetka ee astaantaada. Waxay kaa caawineysaa inaad fahanto sida astaantaada looga soo arko banaanka waxayna muujineysaa qaabab aad kor ugu qaadi karto aragtidaas. Fikradahan waxay kaa caawinayaan inaad sameysato siyaasad iskaashi oo wax ku ool ah.
Waxaad tiraahdaa waxaad helaysaa boqolkiiba 70% imtixaan. Xaqiiqdi, waa gudbid, laakiin natiijada micnaheedu maahan wax badan illaa aad ka ogaato sida ugu wanaagsan ee qof walba u sameeyey. Sidoo kale, si dhab ah uma ogaan kartid waxa falanqayntaada SEO macnaheedu tahay ilaa aad is barbar dhigtid kuwa kula tartamaya.
Falanqaynta tartamayaashu waxay adeegsanaysaa farsamooyin la mid ah kuwa kor ku xusan si loo fahmo sida raad-raaca raad-kaaga dhijitaalka ahi uga horreeyo kan tartamayaashaaga tooska ah. Waxay eegaysaa halka ay ku sugan yihiin hadda shirkadahaani darajadooda, iyo waxay sameynayaan si ay halkaas u gaaraan.
Qiimaynta ereyga furaha
Hadana xafladda ugu weyn. Markaad isu keentid dhammaan falanqayntaan, waa waqtigii aad aqoontaada gelin lahayd. Hadafka ugu dambeeya ee SEO waa inuu sare uqaado websaydhkaaga qalabka mashiinka raadinta ee furayaasha muhiimka ah, sidaa darteed mar alla markii aad falanqeyso mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha wax ku biirinaya, waa waqtigii aad falanqayn laheyd natiijada dadaalkaaga.
Falanqaynta darajooyinka muhiimka ah ee ereyga ayaa noqon doonta mid joogto ah (sida caadiga ah loo qabto maalin kasta) oo dhammaystiran. Waxay kugula socon doontaa booskaaga makiinadaha raadinta badan, waxayna ku siin doontaa fikradaha aad ugu baahan tahay inaad ku hagaajiso darajadaada. Waxay isu tusin doontaa inay qiimo leedahay iyadoo kugu riixeysa qiimeynta waqti ka dib.
Adeegsiga Semalt Analytics si loo hubiyo waxqabadkaaga SEO
Semalt Analytics wuxuu xiraa mid kasta oo ka mid ah sanaadiiqda. Qalabka falanqaynta darajooyinka websaydhka xirfad-yaqaanka ah, waxaa loogu talagalay inay ku siiso aragti cad oo ku saabsan xaaladdaaga SEO ee hadda jira iyo sidii loo abuuri lahaa aragtiyo aan laga adkaan karin oo kaa arki doona inaad ku soo baxdo qiimeynta raadinta ereyada muhiimka ah ee ugu habboon.
Falanqaynta Semalt waxay ku shaqaysaa:
Uruurinta macluumaadka websaydhka
Abuuritaanka warbixin faahfaahsan oo ku saabsan mowqifka SEO ee adiga iyo tartamayaashaada
Bixinta liiska ereyada furaha ah ee u hagi doona boggaaga isla markaana kordhin doona taraafikada
Ku taageerida dadaalkaaga SEO illaa shan makiinado raadinta oo kaladuwan
Falanqaynta darajooyinka waqtiga-dhabta ah iyo gudbinta warbixin maalinle ah ee SEO
U xilsaaridda maamule falanqayn shaqsiyeed inuu kormeero hawsha oo dhan
Falanqaynta Semalt ayaa kuu soo gudbineysa macluumaadka. Waxa aad ku sameyso fikradahaas adiga ayaa iska leh. Waad kudhaqmi kartaa iyaga laftooda, ama waad la tashan kartaa khabiir ku takhasusay Semalt SEO, kaas oo kugu hagi kara adiga oo adeegsanaya aqoontan cusub ee waxqabadka ah.
Ugaarsiga mashiinka baaristu waa dagaal joogto ah. Meelaha wax lagu raadsado ayaa si joogto ah u soconaya, tartamayaashuna waxay weligood raadinayaan inay kugu soo gaaraan. Laakiin fahamka xeerarka ciyaarta, iyo adoo adeegsanaya qalab caqli badan oo ku siinaya fursadda ugu fiican ee guusha, waxaad u badan tahay inaad ka soo baxdo dagaalka guuleysta.
Marka maxaa sugaya? Waa bilaash inaad ku bilowdo Semalt Analytics - waxaad ku dari kartaa websaydhkaaga falanqaynta PRO hadda adigoon bixin boqolkiiba, oo aad ogaato sida saxda ah ee ganacsigaagu u gaari karo guusha SEO.